အမုန်း မဲ့ဂေါ် လီ – Hlataw.com
လင်းလက်အောင်မှာ ဖင်ခေါင်းထဲ လီးဒစ်ကြီး တိုးဝင်လာသည့် ဒဏ်ကြောင့် တစ်ဆို့ဆို့နဲ့ ခံရခက်သလို စံပယ်က စောက်စေ့ယက်ပေးနေလို့ တမျိုးကောင်းပြီး အရသာနှစ်ခုရောထွေးကာ …အီး… ခနဲ ငြီးသံပေးပြီး လက်သီးစုပ်တော့ တုန်ခါစက်ရမုဒ်လေးကို ဖိမိရာ စံပယ့်ခမျာ ထွန့်ထွန့်လူးရပြန်သည်…. နေမြတ်လင်းက လီးကို တဆုံးထိထိုးထည့်ပြီး ဖြည်းဖြည်းနှဲ့လိုးလိုက် ကြမ်းကြမ်းဆောင့်လိုးလိုက်နဲ့မို့ လင်းလက်အောင် ဖင်ဇိမ်တွေ့ကာ စောက်ရည်တွေ ဒလဟောထွက်လာသလို စံပယ်မှာလည်း တုန်ခါစက်ဒဏ်ကို မျော့နေအောင်ခံစားရသည်… နေမြတ်လင်းမှာ သူမှန်းပြီးထုနေတဲ့ လင်းလက်အောင်ဖင်နဲ့တူတဲ့ ဖင်ကို လိုးနေရသည်မို့. စိတ်ပိုကြွကာ ဆောင့်လိုးနေရာမှ ညောင်းလာတာမို့ ဖင်ထဲမှ လီးကိုချွတ် လင်းလက်အောင်ရဲ့ ခြေထောက်တဖက်မကာ ပက်လက်လုပ်ပြီး စောက်ဖုတ်ဝကို လီးတေ့ပြီး တရှိန်ထိုး ဆောင့်သွင်းပစ်သည်….
လီးတဆံးဝင်ပြီး ဆီးခုံနှစ်ခုကပ်ချိန်မှာ “စံပယ် လီးတု ယူထားပေးစမ်း ” လို့ပြောပြီး လင်းလက်အောင်ရဲ့ နို့ကိုကိုင်ပြီး ခြေထောက်နှစ်ချောင်းကို ထမ်းပြီး ဆောင့်လိုးပစ်ရာ…. လိုးသံတဖတ်ဖတ်နဲ့ လင်းလက်အောင်ရဲ့ ညီးသံတချို့က အခန်းမှာ စီနေအောင်ထွက်ပေါ်လာသည်….စံပယ်မှာ နေမြတ်လင်း လီးတုယူခိုင်း၍ ယူပေးလာပေမယ့် လင်းလက်အောင် လက်သီးစုပ်လိုက်တိုင်း သူ့စောက်ဖုတ်ထဲက တုန်ခါစက်ကြောင့် စောက်ရည်တွေက ပေါင်မှနေစီးကျနေသည်…. နေမြတ်လင်းက… လင်းလက်အောင်ကို လိုးနေရင်းက ” ဟိုဖာသည်မ နင့်စောက်ဖုတ်ထဲကဟာကို ထုတ်တော့… ဖီးတက်မနေနဲ့ ပြီးရင် အဲ့လီးတု နင့်စောက်ဖုတ်ထဲ ဝင်သလောက်ထည့် ကိုယ့်ဖာသာလိုးထား… ငါဒီဟာမကို ဝအောင်လိုးအုံးမယ်…. အားပါး ကောင်းလိုက်တာကွာ…. စောက်ဖုတ်ကလည်း ဖောင်းပြီးစီးနေတာပဲ… ဖင်လိုးတုန်းကလည်း ကြပ်နေတာပဲ…